Ixabiso eliphantsi le-Organic Organic Organic Dedicated Machine Suppliers kunye neFektri | YiZheng
Uhlobo olutsha lwe-Organic Chumisa i-Granulator Isetyenziselwa ukugrumba amasuntswana emilo yebhola ngokuthe ngqo ngokusebenzisa zonke iintlobo zezinto eziphilayo emva kokuvumba nokutyunyuzwa.
Luluphi uhlobo olutsha lwe-Organic Organic Granulator?
Uhlobo olutsha lwe-Organic Chumisa i-Granulator Isetyenziswa ngokubanzi kwi-granulation yesichumiso sezinto eziphilayo. Uhlobo olutsha lwegranulator yezichumiso zezinto eziphilayo, ekwabizwa ngokuba ngumatshini wokumanzisa omanzi omanzi kunye nomatshini wokwenza ingqibelelo yangaphakathi, sisichumisi esitsha sesichumiso esenziwe yinkampani yethu. Umatshini akakwazi ukwenza i-granulate kuphela iindidi zezinto eziphilayo, ngakumbi izinto zefayibha ezinzima ekunzima ukuba zityunjwe ngezixhobo eziqhelekileyo, ezinjengomququ wezityalo, intsalela yewayini, intsalela yamakhowa, intsalela yeziyobisi, ubulongwe bezilwanyana njalo njalo. I-granulation ingenziwa emva kokuvumba, kwaye inokufezekiswa kwisiphumo esingcono sokwenza ukutya okuziinkozo kwi-asidi kunye nodaka lukamasipala.
Ungafumana phi isichumiso sendalo?
Izichumiso zeOrganic Organic:
a) Inkunkuma yemizi-mveliso: ezinje ngee-distiller's grains, iiviniga grains, i-cassava residues, i-resides ye-sugar, i-residural residues, njl.
b) Umdaka kaMasipala: njengodaka lomlambo, udaka lwelindle, njl.njl iasidi, intsalela yeoyile, uthuthu lwengca, umgubo weqokobhe, ukusebenza ngaxeshanye, umgubo weqokobhe lamandongomane, njl.
a) Inkunkuma yezolimo: njengomququ, isidlo seembotyi zesoya, ukutya komqhaphu, njl.
b) Imanyolo yemfuyo kunye neenkukhu: ezifana nomgquba weenkuku, iinkomo, iigusha nomgquba wehashe, umgquba womvundla;
c) Inkunkuma yasendlini: efana nenkunkuma yasekhitshini;
Umgaqo wokuSebenza woHlobo olutsha lwe-Organic Organic Granulator
Inkqubo ye- uhlobo olutsha lwegranulator yesichumiso sendalo Isebenzisa amandla oomatshini ashukumisayo ojikelezayo ngesantya esiphezulu kunye nearodynamics ngenxa yokuqhubeka kokuxuba, igranulate, ukujikeleza, eshinyeneyo kunye nezinye iinkqubo zomgubo ocolekileyo kumatshini, ukwenzela ukufezekisa igranulation. Ubume be-particle bububanzi, ubukhulu be-particle bubukhulu phakathi kwe-1.5 no-4 mm, kunye nobukhulu be-2 ~ 4.5mm ngu -90%. Ubungakanani be-particle bunokulungiswa ngokufanelekileyo ngokuxuba izinto kunye nesantya sokuluka. Ngokwesiqhelo, isezantsi isixa sokuxuba, kokukhona isantya sokujikeleza sikhula, isuntswana lincinci, kunye nesuntswana elikhulu.
Iimpawu zohlobo olutsha lwe-Organic Organic Granulator
►Imveliso yegranule ibhola ejikelezileyo.
►Umxholo we-organic unokuphakama ube kwi-100%, wenze i-organic granulate emsulwa.
►Amasuntswana ezinto eziphilayo angakhula phantsi kwamandla athile, akukho mfuneko yokongeza ibinder. xa igranulating.
►Imveliso yegranule inobunzima, inokusefa ngokuthe ngqo emva kwegranulation ukunciphisa amandla. ukusetyenziswa komiswa.
►Emva kokuvumba kwendalo akufuneki ukuba zome, ukufuma kwento eluhlaza kunokuba ngaphakathi. 20% -40%.
Itekhnoloji ye-Organic ye-Organic Production Granulation Line
Ukuhlangabezana neemfuno zezichumiso ezinkulu zezinto eziphilayo, WE Zhengzhou Yizheng Heavy Machinery Co, Ltd. ukuyila ngobungcali kunye nokuvelisa umgca wemveliso yezichumiso eziphilayo kunye noomatshini abafanelekileyo abafanelekileyo kwizinto ezahlukeneyo zezinto eziphilayo, ebeyinkokeli ebaleni e-China.
Iziphumo zoNyaka zeZityalo eziNcinci eziCwangcisiweyo (300 yeentsuku zokusebenza)
Iitoni ezili-10,000 / ngonyaka
Iitoni ezingama-20,000 / ngonyaka
Iitoni ezingama-30,000 / ngonyaka
1.4 iitoni / ngeyure
2.8 iitoni / ngeyure
4.2 iitoni / ngeyure
Iziphumo zonyaka zoMatshini wokuChumisa oPhakathi ngokuphakathi
Iitoni ezingama-50,000 / ngonyaka Iitoni ezingama-60,000 / ngonyaka Iitoni ezingama-70,000 / ngonyaka Iitoni ezingama-80,000 / ngonyaka Iitoni ezingama-90,000 / ngonyaka Iitoni ezili-100,000 / ngonyaka
6.9 iitoni / ngeyure 8.3 iitoni / ngeyure 9.7 iitoni / ngeyure Iitoni ezili-11 / ngeyure 12.5 iitoni / ngeyure 13.8 iitoni / ngeyure
Iziphumo zoNyaka zoMatshini wokuChumisa oNkulu oBanzi
Iitoni ezingama-150,000 / ngonyaka Iitoni ezingama-200,000 / ngonyaka Iitoni ezingama-250,000 / ngonyaka Iitoni ezingama-300,000 / ngonyaka
20.8 iitoni / ngeyure 27.7 iitoni / ngeyure 34.7 iitoni / ngeyure Iitoni ezingama-41.6 / iyure
Kusimahla kuthintelo lwamaxesha onyaka kunye neendleko eziphantsi kweendleko zokuvutshelwa kweAerobic
"Guqula inkunkuma ibe bubutyebi", akukho mpatho mbi, unyango olungenabungozi
SUmjikelo wemveliso yokuqina kwesichumiso sezinto eziphilayo
Sukusebenza kunye nokulawulwa okufanelekileyo
Inkqubo yokuSebenza kweMveliso yokuChumisa uManyolo
Ukuvundisa yinkqubo esisiseko yemveliso. Ukufuma, ubushushu kunye nexesha kufuneka zilawulwe ngokungqongqo. Ukujika komgquba ngumatshini wokuchumisa osetyenziselwa ukukhawulezisa ukuvundiswa kwezinto ezincinci kunye nokuphucula umgangatho womgquba.
Izinto zokuhamba kufuneka zichithwe emva kwenkqubo yokubila. Kunzima ukwenza lo mbandela ube ngamagrafu ngesandla. Ngale ndlela, kuyimfuneko ukusebenzisa isichumisi isityumzi. Sincoma abathengi ukuba bakhethe umatshini wezinto zokunyusa eziphezulu, njengoko unokuchoboza izinto ezinamanzi amdaka kunye nokuchaneka okuphezulu.
Yinkqubo ebalulekileyo yemveliso kuyo yonke imveliso. Ngokweemfuno ezahlukeneyo, izondlo zinokongezwa. Amacandelo e-Spherical acutshungulwa, okonga amandla amaninzi. Ke ngoko, ukukhetha umatshini ofanelekileyo wesichumiso kubaluleke kakhulu. Uhlobo olutsha lwe-organic organic granulator ngowona mshini ulungileyo.
Emva kwegranulating, igranules zifuna ukomiswa. Ukufuma isichumiso eziphilayo kuyehla ukuya kwi-10% -40%. Umatshini wokuqhuba igubu ojikelezayo sisixhobo sokunciphisa ukufuma kwamasuntswana, anokwenzeka kwimveliso yezichumiso eziphilayo.
Ukuqinisekisa umgangatho, amasuntswana kufuneka apholise emva kokumisa ngoncedo lomatshini wokupholisa umgqomo ojikelezayo.
Kukho izichumiso ezingagunyaziswanga ngexesha lokuvelisa. Ifuna umatshini wokujonga isichumisi segubhu ukuhlukanisa iimpahla ezilahliweyo kwinto esemgangathweni.
Umatshini wokupakisha isichumisi usetyenziselwa ukupakisha izichumisi ezicwangcisiweyo. Singasebenzisa ukupakisha umatshini ukupakisha kunye nengxowa amasuntswana.Ingafezekisa iimveliso zokupakisha ngokuzenzekelayo nangokufanelekileyo.
Uhlobo olutsha lweOrganic Organic Granulator Umboniso weVidiyo
Uhlobo olutsha lwe-Organic Fertilizer Granulator Model
Iimodeli zokucacisa i-granulator zingama-400, 600, 800, 1000, 1200, 1500 kunye nezinye iinkcukacha, ezinokuthi zenziwe ngokwezifiso ngokweemfuno zokwenyani.
Ubungakanani beGranule (mm)
Imilinganiselo (L × W × H) (mm)
Egqithileyo Isongezo sokuqengqeleka seComputer Extrusion Compound
Okulandelayo: Isiguquli seGubu seCompound Fertilizer Granulator
Intshayelelo Yintoni i-Counter Flow Flow Machine? Isizukulwana esitsha seComper Flow Flow Coating Machine siphandiwe kwaye saphuhliswa yinkampani yethu, iqondo lobushushu emva kokupholisa alikho ngaphezulu kweqondo lobushushu kwigumbi 5 ℃, ireyithi yemvula ayikho ngaphantsi kwe-3.8%, kwimveliso yeepellets ezikumgangatho ophezulu, yandisa istora ...